Vaovao - andrasana hiroborobo ny tsenan'ny fonon'ny trano fidiovana. Orinasa malaza - Fengcheng Zhonghe Paper Products
Antenaina hiroborobo ny tsenan'ny fonon'ny trano fidiovana. Orinasa malaza - Fengcheng Zhonghe Paper Products
Ny sandan'ny tsenan'ny fonon'ny trano fidiovana amin'ny 2020 dia US $ 2 miliara. Miorina amin'ny fikarohana sy fanamarihana etsy ambony, ny ekipanay dia manana tahan'ny fitomboana isan-taona 6,2% hatramin'ny 2021 ka hatramin'ny 2027, ary antenaina hitombo ao anatin'ny dimy ka hatramin'ny fito taona ho avy.
Ny fizarana tsena dia mifototra amin'ny karazana rakotra fipetrahana, ny faritra fampiharana ary ny faritra jeografia lehibe. Ny antony lehibe rehetra dia voamarina tsara, toy ny toe-piainana, tontolo iainana ara-toekarena sy politika, fomban-kolontsaina, lalàna mifehy ny tarif ary ny masoivohom-panjakana izay mamaritra ny fironana eo amin'ny tsena. Ny rakotra seza fidiovana dia samy hafa sy feno satria manarona ny lafiny rehetra amin'ny tsena isan-karazany mba hanomezana vinavina mazava hanampiana ireo mpampiasa vola handray fanapahan-kevitra tsara momba ny fotoana mety hampiasam-bola.
Mizarazara amin'ny karazana fonosana fidiovana sy ny faritra fampiharana, ny faritra lehibe amin'ny tsena dia mizara ho Amerika Avaratra, Eoropa, Azia Pasifika ary Rest of the World (RoW). Ireo faritra ireo dia zaraina ho: • Amerika Avaratra (Etazonia, Kanada ary Mexico) • Eoropa (UK, France, Alemana, Espana, Rosia ary ny sisa any Eropa) • Azia Pasifika (Sina, India, Korea atsimo, Taiwan, Singapore ary Azia Pasifika hafa) Faritra) • Ny sisa amin'izao tontolo izao (Amerika atsimo sy afovoany, atsinanana afovoany ary afrika)
Ny tombony azo avy amin'ny fividianana fonony feno fidiovana • Ny haben'ny tsena sy ny vinavina: 2020 hatramin'ny 2027 • CAGR: 2020 hatramin'ny 2027, miaraka amin'ny taona 2020 ho fiandohan'ny taona • Topy maso feno an'ireo mpifaninana lehibe • Nasiana peta-drindrina ny lafiny famatsiana sy ny fangatahana mba hamarinina. tsena • Mampihatra fampidirana amin'ny antsipiriany ny fomba fikarohana triangulation data hafa noho ny fomba fikarohana voalohany sy faharoa mba hijerena tsara ny fironana amin'ny tsena
• Ny fandefasana sary an-tsaina ireo mpanjifa ao anaty takelaka 3P misy ny tanjona, ny drafitra ary ny fametrahana azy ireo hanomezana vahaolana amin'ny alàlan'ny fitazonana ireo mety ho mpanjifa amin'ny toerana tsara indrindra. famakafakana, fahafaha-mitombo, ary tolo-kevitra amin'ny famahana ny olana eo amin'ny tsena amin'ny orinasa mitarika indostria manararaotra ny toeran'ny tsenany. • Manome drafitra sy fenitra stratejika ihany koa hahafahan'ny mpilalao manan-danja handray fanapahan-kevitra ara-barotra hendry hampiroborobo ny paikadim-barotra. • Ho fanampin'izay, manome fomba fijery momba ny dinamika amin'ny fitondran-tena ho an'ny mpanjifa izy io, izay afaka manampy ny fikambanana hampivelatra ny paikadin'ny tsena
• Ny fanaovana sarintany sy ny famakafakana ny tsena amin'ny fomba fijery 360 degre mba hamakafaka ny anton-javatra rehetra izay mety hisy fiantraikany amin'ny tsena • Fanaraha-maso mety amin'ny lafiny famatsiana sy ny fangatahana mba hamaranana ny fehin-kevitra • Fametahana ny tsena avy amin'ny mpanamboatra sy ny lafiny mpanjifa • Fomba triangulation data mba Mahazo isa ara-barotra marina, notadiavinay • Manarona mpamily, teritery ary mety • Hatramin'ny telo ka hatramin'ny efatra ny fizarana tsena no omena ao amin'ny tatitra • Ny antsipiriany tsirairay dia voatonona ao amin'ny faritra fampiharana sy faritra ara-jeografika ny fizotran'ny tsena sy ny fironana amin'ny tsena • Ny famakafakana ny sehatra an-tanindrazana dia tafiditra ao amin'ny toko "By Geographic Region" • Misy fakantsary ho an'ny fandinihana tsena haingana • Fomba fikarohana maro karazana no ampiasaina hanadihadiana ny tsena
Fotoana fandefasana: Feb-17-2021